छोरीले विवाह गर्न नमानेपछि आमा नै दुलाहासँग हिँडिन्….::Leading Nepal News
छोरीले विवाह गर्न नमानेपछि आमा नै दुलाहासँग हिँडिन्….
एजेन्सी । भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपूर जिल्लामा अधबैंसे दुलहालाई देखेपछि दुलहीले विवाह गर्न अस्विकार गरिन् । भारतीय मिडियाका अनुसार दुलहीले दुलहातर्फ माला फ्याँक्दै चिच्याउँदै भनिन्, ‘ममाथि धोका भएको छ ।’स्रोतका अनुसार दुलहीको यस्तो व्यवहार देखेपछि त्यहाँ उपस्थित पाहुना, जन्ती अचम्मित भए । त्यतिबेला आमाले छोरीलाई ठूलो दबाब दिइन् तर उनले मानिनन् । रिपोर्टका अनुसार निकै सम्झाएपछि पनि जब छोरी मानिनन् तब दुलहीकी आमा नै दुलहासँग आगरा गइन् ।
जब झ्याल फोडेर गोही घरको भान्छामा पस्यो….
विवाह मण्डपमै बेहुलाले यस्तो गरेपछि..
सुगाजस्तो बन्न यी व्यक्तिले गरे यस्तो अनौठो काम….
अब जिभ्रोबाटै यसरी थाहापाउनुहोस कुन महिलाको स्वभाव कस्तो.
मान्छेको कानभित्रै माकुराले जालो लगाएपछि
अस्ट्रेलियामा रूख रुन थालेपछि खुल्यो यस्तो रहस्य..
अष्ट्रेलियामा पादको मूल्य नेपाली २० करोड !
यौन प्यास मेटाउन बेश्यालय छिरेका पुरुषले जब आफ्नै श्रीमती र छोरी भेटे !
छोरीको बिहे नभएपछि बाबुको यस्तो अनौठो जुक्ति !